musha Blog Nhoroondo yekuvandudza yemabhasikoro emagetsi
Zuva ： 2021-07-30 Zvikamu:Blog Views: 1,818 maonero
Nhoroondo yekuvandudza yemabhasikoro emagetsi.
An motokari mabhasikoro zvinoreva mota yemunhu inoshandisa bhatiri seyakabatsira magetsi sosi uye ine mota, mutyairi, an ebike battery, mubato uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoshanda uye inoratidzira sisitimu sisitimu pahwaro hweyakajairika bhasikoro.
Nhoroondo yekuvandudzwa kwemabhasikoro emagetsi muChina inowanzozivikanwa muindasitiri sezvikamu zvitatu zvebudiriro: danho rekutanga remabhasikoro emagetsi, nhanho yekutanga kugadzirwa kukuru, uye nhanho yekuwedzera-kumhanyisa kusimudzira.
Iyo yekutanga yekuyedza yekugadzira nhanho ye mabhasikoro emagetsi, maererano nenguva, ndiko kuti, kubva 1995 kusvika 1999. Iyi nhanho inonyanya kuongorora matekinoroji akakosha ezvikamu zvina zvikuru zvemabhasikoro emagetsi, mota, bhatiri, charger uye controller.
Iyo yekutanga nhanho yekukura kwakakura-kugadzirwa:
Nekubudirira kweakakosha matekinoroji uye nekuenderera kuri kuvandudza mashandiro emabhasikoro emagetsi, mabhasikoro emagetsi ave chinotsiva midhudhudhu nemabhasikoro. Kumhanya kwayo, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nyore uye zvakachipa zvakafemerawo Musika kudiwa kwe mabhasikoro emagetsi. Mukuda kuri kuramba kuchiwedzera kudiwa kwemusika, makambani akambogadzira nekuaburitsa akasimuka nekukurumidza, uye mamwe makambani matsva akatangawo kupinda. Kuisa kwavo mari mumabhasikoro emagetsi kwave kuri kuwedzerawo, izvo zvakonzera kukurumidza kukurumidza kwesimba rekugadzira.
Kupfuura-kumhanyisa danho rekuvandudza:
Kubva 2005 kusvika parizvino, danho iri ndiro rekumhanyisa-kumhanyisa danho rekuvandudza kweChina mabhasikoro emagetsi, iyo inonzi "danho rinoputika" nemhizha. Munguva iyi yenguva, sezvo makwikwi anotyisa pakati pemabhizinesi akakurudzira zvakanyanya kufambira mberi kwetekinoroji uye kupararira kwetekinoroji nyowani, iro tekinoroji yeindasitiri yese yakagadziridzwa zvakanyanya, hupenyu hwebhatiri uye kugona kwakawedzera ne35%, uye mota yachinja kubva kubrashi rimwe kuenda kubrashi. Magiya emagetsi akakwenenzverwa kupinda mune akakosha ebhurashi-emhando yepamusoro mota, nehupenyu hwavo hwakawedzera neka5, kugona kwakawedzera neinenge 30%, uye kukwira uye kutakura huremu kwakawedzera neanenge ka3.5 nguva. Kunyange kuita kwacho kwakagadziridzwa, mutengo wekugadzira waderedzwawo zvakanyanya, uye simba remutengo raderera kusvika pa21%; mune yeanodzora system uye yechaji sisitimu, iro rehunyanzvi danho rakagadziridzwa zvakanyanya.
Kana iwe uchifarira mabhasikoro emagetsi, iwe unogona kupinda pawebhusaiti yedu yepamutemo kuti udzidze zvimwe zvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kana paine chero mubvunzo. www.vadar.com.
* Mushandisi wemhando: Mutengesi / Mutengesi OEM / ODM Distributor Tsika / Retail E-commerce
Prev: Nzira dzekuchengetedza dzemagetsi mota yemabhasikoro
Next: Kupeta ebikes: wedzera zvishoma kurerukirwa kune hwako hwakabatikana hupenyu
Maitiro ekunyatso chengetedza iyo yemagetsi bhasikoro cheni
mudhudhudhu mutsva wemagetsi 48V 750W maviri mota
Magetsi mudhudhudhu 48v 500w 13Ah 10Ah inobvisa lithium bhatiri D1